Vaovao - Inona no tokony hojerenao rehefa mividy akanjo mandatena ho an'ny ankizy?
Isika olon-dehibe dia mitondra elo foana rehefa mandeha. Ny elo dia tsy afaka alokaloka fotsiny, fa koa misoroka ny orana. Mora entina dia iray amin'ireo entana ilaina amin'ny diantsika, saingy indraindray tsy dia mety loatra ho an'ny ankizy ny mitazona elo. Ilaina ny fanaovan'ny ankizy akanjo palitao ho an'ny ankizy. Betsaka ny karazana akanjo palitaon'ankizy eny an-tsena. Inona no tokony hojerentsika rehefa mividy palitaon'ankizy? Ireto mpanamboatra jasco Foshan manaraka ireto dia hilaza aminao fohy ny raharaha mila fiheverana rehefa mividy palitao ankizy!
1. Ny fitaovan'ny palitaon'ankizy
Amin'ny ankapobeny, ny palitaon'ankizy dia vita amin'ny akora vita amin'ny PVC, ary ny palitao tsara kokoa dia vita amin'ny PVC sy nylon. Na inona na inona fitaovana ilaina dia mila tazomintsika aorian'ny fividianana isika, mba haharitra kokoa ny palitao.
2. Haben'ny orana an'ny ankizy
Rehefa mividy palitaon'ankizy dia tsy maintsy jerentsika ny habeny. Ny ray aman-dreny sasany dia mety mieritreritra fa ny palitaon'ankizy dia tokony ho lehibe kokoa mba hahafahan'izy ireo mitafy lava. Raha ny marina, ny palitaon'ankizy izay be loatra dia tsy tsara, ary hitondra ny ankizy handeha an-tongotra. Tsy fahatomombanana, tsara kokoa ho an'ny ankizy ny manandrana akanjo lava rehefa mividy akanjo mando mba hahafahany mividy akanjo mando mety kokoa.
3. Misy fofona hafahafa ve
Mamofona raha misy fofona hafahafa rehefa mividy palitao an-jaza. Ny orinasa tsy mahay mandanjalanja sasany dia hampiasa fitaovana tsy mendrika hametrahana palitao ho an'ny ankizy. Akanjo manafotra an'ny ankizy toy izany dia hanana fofona manitra. , Aza mividy raha misy fofona hafahafa.
Akanjo palitao efatra, kitapo
Rehefa mividy palitao ho an'ny ankizy dia tavela any an-damosina ny palitao misy toerana malalaka ho an'ny kitapo. Amin'ny ankapobeny ny ankizy dia mila mitondra kitapo. Noho izany, rehefa mividy palitaon'ankizy dia tokony mividy palitao manana toerana malalaka any aoriana.
Dimy, palitaon'ankizy dia maro loko
Rehefa mividy palitao ho an'ny ankizy dia aza hadino ny mividy palitao miloko marevaka, mba hahitan'ny mpamily sy ny namana lavitra azy ireo ary hisorohana ny lozam-pifamoivoizana.